ग्रह चक्रमा शुक्रको राशि परिवर्तन, यी राशिको चम्किनेछ भाग्य !! यसमा,तपाईं त पर्नु भयन… – News Nepali Dainik
ग्रह चक्रमा शुक्रको राशि परिवर्तन, यी राशिको चम्किनेछ भाग्य !! यसमा,तपाईं त पर्नु भयन…
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७७ समय: १०:२६:४३
भौतिक सुखको कारक शुक्र ग्रह आजबाट मकर राशिमा प्रवेश गरिसकेको छ। शुक्र ग्रह यस राशिमा फेब्रुवरी २१ सम्म रहनेछ। त्यसपछि, कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछ। ज्योतिषशास्त्रमा शुक्रलाई वृष र तुला राशिको स्वामी ग्रह मानिन्छ। शुक्र ग्रह कन्या राशिमा नीच र मीन राशिमा उच्च रहन्छ।
शुक्रको राशि परिवर्तनले सबै १२ वटै राशिमा प्रभाव पार्नेछ।
मेष राशि :व्यापाय व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। आर्थिक पक्ष मजबूत हुनेछ। विवाह सम्बन्धि छलफल सफल हुनेछ। रोकिएका काम सफलताका साथ पूरा हुनेछ। सरकारी क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। आमा-बुबाको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्न जरूरी छ।
वृष राशि :कार्यक्षेत्रमा आइरहेको समस्याको समाधान हुनेछ। घरमा-कर्मको मामिलामा मन लाग्नेछ। दाङ-पुण्यको कार्य गर्नुहुनेछ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ताबाट मुक्ति मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ।
मिथुन राशि :स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेछ। कार्यस्थलमा षडयन्त्रको शिकार हुनबाट बच्नुहोस्। सामाजिक क्षेत्रमा मान-प्रतिष्ठा बढ्नेछ। योजनाहरू पूर्ण नभएसम्म गोप्य राख्नुहोस्। सफलता प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरूले कडा परिश्रम गर्नु पर्छ।
कर्कट राशि :रोजगार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। सरकारी काम-काज सरलताका साथ सम्पन्न हुनेछ। कर्यक्षेत्रमा उच्च-पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्। विवाह सम्बन्धि वार्ता पनि सफल हुनेछ। काकुनी मुद्दामा फैसला तपाईको पक्षमा आउन सक्छ।
सिंह राशि :गोप्य शत्रुहरू बढ्नेछन्। स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्नेछ। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा बढ्नेछ। परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू र उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिनुहोस्।
कन्या राशि :प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता आउनेछ। तपाईं आफ्नो भाषण कौशलको सहायताले सबैभन्दा कठिन परिस्थितिहरूमा पनि नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। नव दम्पतिको लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ।
तुला राशि :पारिवारिक कलह र मानसिक अशान्तिको सामना गर्न सकिन्छ। साथी तथा आफन्तहरूबाट अप्रिय समाचार प्राप्त हुनसक्छ। घर जग्गा सम्बन्धी सम्बन्धित समस्याको समाधान हुनेछ। महिलाका लागि यो समय अत्यन्त राम्रो रहनेछ।
वृश्चिक राशि :कडा परिश्रमको बाबजुद पनि सफलताको सम्भावना थोरै छ। परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरू र भाइहरु बीच मतभेद उत्पन्न हुन नदिनुहोस्। धर्मको मामिलामा गहिरो चासो हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्नेछ। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला।
धनु राशि :कार्यक्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। अधिक खर्चका कारण आर्थिक पक्ष कमजोर रहन सक्छ। आयका साधनहरूमा क्रमिक वृद्धि हुनेछ। घर जग्गा सम्बन्धित समस्याको समाधान गरिनेछ। सवारी किन्ने संकल्प पनि पूरा गर्न सकिन्छ।
मकर राशि :सबै प्राकारका कठिन परिस्थितिबाट मुक्ति मिल्नेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतीको समभावना रहेको छ। सरकारी कार्य सम्पन्न हुनेछ। विदेशी कम्पनीहरूमा सेवाको लागि आवेदनहरू पनि सफल हुनेछन्।
कुम्भ राशि :अधिक खर्च हुनेछ। अत्यधिक भागदौडको कारणले तपाईं थकान पनि अनुभव गर्नुहुनेछ। कार्य सफलता प्राप्त गर्नको लागि केहि ढिलाई हुनसक्छ। आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ। कार्यस्थलमा षडयन्त्रको शिकार हुनबाट बच्नुहोस्।
मीन राशि :आयका साधनहरू बढ्नेछन्। गोप्य शत्रुहरूबाट सावधान रहनुहोस्। ऋण दिएको पैसा पनि फिर्ता आउने सम्भावना छ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतीको योग रहेको छ। यो समयमा कसैलाई पनि ऋण नदिन सल्लाह दिइन्छ।
Last Updated on: February 10th, 2021 at 10:26 am